कमरेड र टाउकाको मोल ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
कमरेड र टाउकाको मोल !
प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार १६:१४
♣ चन्द्रमणि गौतम ♣
सत्तारुढ पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूले भेला भएर खसीको टाउको खाने सल्लाह गरे । समाजवादी आदर्श अनुरुप कसैलाई मर्का नपर्ने हुनाले भेला हुँदा एक–एक वटा टाउको लिएरै आउने पनि सहमति गरे । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली, अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टीका महत्वपूर्ण नेता बामदेव गौतम, अर्का महत्वपूर्ण नेता तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ तोकिएको समयमा एकएक वटा टाउका लिएर उपस्थित भए ।
त्यसबाहेक पार्टीको भावी बागडोर सम्हाल्न सक्ने होनहार नेताका रुपमा ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई पनि उपस्थित हुन बोलाइएको थियो । उनीहरू पनि एक–एकवटा टाउका बोकेरै आए ।
भेला हुनासाथ नेताहरू आफूले हालेको टाउकाको मोल बताउन थाले ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले सुनाए– मेरो टाउकाको मूल्य २९० रुपैयाँ ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सुनाए— के हो ? मनें, टाउको उत्रै छ, तर मेरो टाउकाको मोल त १०० रुपैयाँ मात्रै परो नि त !
वरिष्ठ नेता माधवजी आफ्नो टाउकाको मोल सुनाउन थाले– यो हुँदै भएन, मेरो टाउकाको मोल २५० रुपैयाँ । वर्तमान परिप्रेक्षमा यस्तो जथाभावी बजारभाउ गर्न हुन्छ !
अर्का भुपू अध्यक्ष झलनाथजीले भने– यो सब समाजवादी आदर्शबाट विचलित भएको छाडा बजारको नतिजा हो । मेरो टाउकाको दाम २०० रुपैयाँ परो ।
मैले पनि ठ्याक्कै २०० रुपैयाँ हालेँ– महत्वपूर्ण नेता बामदेव गौतमले आफ्नो टाउकाको मोल सुनाए ।
पार्टी प्रवक्ता तथा अविवाहित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए– मेरो टाउकोलाई १५० रुपैयाँ परो ।
तर ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र घनश्याम भुसाल निक्कै रन्किएर बताए– उनीहरूका प्रत्येक टाउकाको मूल्य ३०० रुपैयाँ रहेछ ।
भीम रावल जङ्गिए :- क्या हो प्रधानमन्त्रीज्यू ! कसैका टाउकालाई तीनसय रुपैयाँ ,कसैको टाउको एकसय रुपैयाँमै ! बजारभाउ पनि ठीक राख्न नसक्ने अनि समाजवादतिरको यात्रा भन्दै सबैले हाम्लाई हाईहाई गरिदिउन् भनेर अपेक्षा गर्ने ?
ईश्वर पोखरेल अलिक संयम देखिए, प्रधानमन्त्रीज्यू यो ता अति भो ! उत्रै र उस्तै टाउकाको दाम यत्रो फरक ! धन्न हामीलाई जनताले सहिराखेका छन् ।
उता वैचारिक नेता घनश्याम भुसाल भन्न थाले– बजार भाउ पनि ठीक राख्ने लूर छैन भने अरू ठूलठूला धाक लगाउनु कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार एउटा मजाक मात्र हुन्छ ! पोल्याण्डमा मासुको भाउकै निहुँमा कम्युनिस्ट शासन ढलेको नबिर्सौं । हौसिन छोडिदिऊँ प्रधानमन्त्रीज्यू, सकिन्छ भने युद्धस्तरमा बजार भाऊ घटाएर देखाऔं र पहिले जनतामा आशाको सञ्चार गराऔं !
टाउका किनेको मासु पसलबारे खैलाबैलाका साथ आपसमा सोधखोज भयो । सबैले एउटै पसलमा किनेका रहेछन् ।
प्रचण्डले गदगद् हुँदै गौरवकासाथ बताउन थाले– मनें यो टाउकाको मोल पहिले कुख्यात भा’थ्यो, अहिले यो हाम्रो लोकप्रियता नाप्ने जनमत भएर देखियो । जनताले माओवादीलाई नै सबभन्दा बढी रुचाएको संकेत हो यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको धाकले खपिनसक्नु बनायो । देख्या कुरा ड्याम्मै भनिदिहाल्ने उनको स्वभावअनुसार प्रतिक्रिया दिए, सस्तैमा दिन्छौ भने देऊ होइन भने जनयुद्ध जारी छ; कमरेड विप्लवहरू टाढाका होइनन्, हिजोसम्म एउटै थालमा खाएर एउटै ओछ्यानमा सुतेका हाम्रै कमरेड हुन् भनेर सातो लिन थाल्नु भो होला; विचरा मासु पसले के गरोस्, आत्तिएर दियो होला नि !
नारायणकाजीले पनि धाक जमाए, प्रधानमन्त्रीज्यू ! कमरेड प्रचण्डको कुरामा दम छ भन्ने कुरा मेरो टाउकाको मोल कमरेड प्रचण्डको भन्दा ५० मात्रैले बढि भएकोबाटै पुष्टि भएन र !
प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रतिक्रिया दिए, “खसीको टाउको देखा’र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनेर घोक्याघोक्यै गरेकै ठाउँमा आईपुग्या मान्छे ! के थाहा, मासुचाहिँ बेचिसक्या कुकुरको टाउको लिएर आउनु भा’ हो कि ! जाँचबुझ बाँकी नै छ ।”
भीम रावलको रौद्र रुपतिर फर्केर सान्त्वना दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “के हो ! मैले कम्मर कसें भनेको त कन्ननी चुँडिएको लगौँटीमात्र कसिरहेको रहेछु कि क्या हो त !”
बामदेव बेग्लै बम्किरहेका छन्, “तपाईलाई हामीले यत्रो दुःख गरेर गौरवशाली अवसर दिएको यस्तै बेथितिका लागि हो ? पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्दै गीत गाएको त्यसै होइन भन्ने कहिले बुझ्ने ?”
प्रधानमन्त्रीले जवाफमा बामदेवलाई डाईलग दिए, “सारा कमरेडहरूले चुनाव जितेको बेलामा समेत आफू जित्न नसक्ने, मलाई गौरवशाली अवसर दिएको रे ! मैले बाउलाई तरिका सिकाइदिएपछि हाम्रो दाई जन्मेको भनेजस्तो ! मलाई त यस्तो सुनाईहाल्नु भो, अरुलाई चैँ नसुनाउनु होला । आखिर म तपाईकै शुभेच्छुक हुँ ।”
आखिर सबैले आ–आफ्ना टाउका बोकेरै मासु पसलेकहाँ किन यो बेथिति मच्चाएको रहेछ सोध्न जाऔं भन्ने सहमति भयो र कमरेडहरू त्यतै हिँडे । मासु पसलेको हर्कतबारे सबैले उसलाई र्याखर्याख पार्न थाले । विचरा उसको ओठमुख सुक्यो, गाला राताराता भए । अब ऊ प्रत्येक टाउकाको मूल्यको कारण बताउन थाल्यो ।
नारायणकाजीको टाउको देखाउँदै पसलेले बतायो, “तपाईको टाउकोमा गिदी, जिब्रो, कान, आँखा सबै छ तर थोरथोरै मात्र । फेरि यिनको कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । त्यसैले पूरा दामको आधामात्र ।
ईश्वर, भीम र घनश्यामका टाउकालाई देखाउँदै पसले भन्छ, “हजुरहरूको टाउकामा गिदी, जिब्रो, कान, आँखा सबै राम्रा छन् । टाउको अब्बल र ताजा छ, त्यसैले यी टाउकाको मोल तीनसय रुपैयाँ ।”
बामदेव सरको टाउकोमा जिब्रो, कान र आँखा त ठीक छ तर गिदी त्यति राम्रो छैन, धेरै पनि छैन । त्यसैले तपाईको टाउकालाई दुईसय रुपैयाँ । झलनाथ सरको कान र आँखा ठीक छ, तर गिदी र जिब्रो दुवै भएपनि सुकेर खुम्चिन थालेको छ । त्यसैले यसलाई पनि २ सय रुपैयाँ ।
माधव सरको टाउकोका गिदी र कान ठीक छन् तर जिब्राको ग्यारेन्टी छैन, आँखा पनि त्यति राम्रो छैन । त्यसैले पूरा दामभन्दा ५० रुपैयाँ कम !
पर्धानमन्त्रीज्यूको गिदी, कान र आँखा त एकदम ठीक हो तर जिब्रोमा अलिकति जहर घुसेको छ । त्यो उतार्न अलिकति मिहिनेत लाग्छ । त्यही मिहिनेतका लागि १० रुपैयाँ कम, २९० लिएको ।
प्रचण्ड सरको टाउकोमा गिदी जिब्रो कान आँखा सबै छन्, तर सडेर कामै नलाग्ने भएका छन् । टाउको भन्नु नै यी ४ चिज हुन्, तर यिनै ठीक छैनन् भने हाड–छालाको मात्र के मोल भनेर सय रुपैयाँ मात्र लिएको हजुर ! रिसानी माफ होस्, मैले मूल्यमा न्याय गरेको छु । टाउकाको मोल तोक्ने सरकारको जस्तो होइन, मोल तोक्ने मेरो तरिका !
सबै अवाक भएर जताबाट आएको हो उतैतिर बाटो लागे ।
(प्रचलित फर्मूलाअनुरुप समकालिन सन्दर्भ, पात्र र सन्देशलाई लिएर रचित कल्पना)